www.diyopost.com '; '; ';
# स्थानिय तह
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिः अप्रिल १ देखि काम सुरु, १० घण्टा बन्द हुने
By: दियो पोस्ट
मा प्रकाशित 58 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, कार्तिक २० । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको स्तरोन्नति अर्थात पुर्नसुधारको काम अघि बढेको छ । धावनमार्ग स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जीनियरिङ कर्पाेरेसनसँग निर्माण सम्झौता भएसँगै विमानस्थल निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग करबाहेक तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ धावनमार्ग कालोपत्र परिवर्तनका लागि सम्झौता हुन लागेको क्यानले जनाएको छ । सन् १९८० मा निर्माण भएको धावनमार्ग अहिलेसम्म विस्तार तथा मर्मत हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण इतिहासमा पहिलो पटक धावनमार्ग पुर्नसुधार गर्न लागिएको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जनाएको छ । धावन मार्ग स्तरोन्नतिको काम शुरु हुनुअघि आवश्यक तयारीका लागि पाँच महीनाको समय दिइएको छ ।
हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलले सम्झौतासँगै विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अबको एक सातापछि आयोजनाका साथ अघि बढाइनेछ । काम थाल्नुअघि पूर्णरुपमा तयारीका लागि सामग्री र जनशक्ति दुवैको व्यवस्था गरी अप्रिलको पहिलो सातादेखि धावनमार्ग कालोपत्र शुरु गरिनेछ ।
विमानस्थल दश घण्टा बन्द हुने
क्यानको योजनाअनुसार आगामी अप्रिल १ तारीखबाट धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम शुरु हुनेछ । कम्पनीले पहिलो चरणमा तीन हजार मिटरको धावनमार्गको कालोपत्र परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । दैनिक ८० मिटरका दरले मिलिङ मेशिनको साथमा राति धावनमार्ग बनाइनेछ । यो क्रममा दैनिक १० घण्टा (राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म) बन्द हुनेछ ।
धावनमार्ग सकेपछि ‘पार्किङ बे’ को काम शुरु गरिनेछ । निर्माण कम्पनीले ४५ दिनको स्तरोन्नतिको तालिका बनाएपनि क्यानले ७० दिनको अवधि तोकेको छ । सन् २०१९ को अप्रिलदेखि विमानस्थल बेलुका १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म पूर्णरूपमा बन्द गरी धावन मार्गको कालोपत्र परिवर्तन शुरु गर्न लागेको क्यानले जनाएको छ
। करिब चार महीनामा धावनमार्गको कालोपत्रको काम सकिनेछ । धावनमार्गको काम सकेपछि बाँकी अरु चार महीनामा ट्याक्सी चल्ने मार्ग लगायतका काम सकिनेछ ।
लामो समयदेखि धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा पटकपटक समस्या परेपछि सरकारले पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने योजना बनाएको हो । देशकै ऐनाका रुपमा रहेको संवेदनशील मानिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विमानस्थल मर्मतको काम उच्च प्राथमिकतामा परेको क्यानले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको धावन मार्ग एक वर्षभित्र पूर्णरुपमा मर्मत (कालोपत्र) गर्ने कार्य एक नम्बर प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आउनुभएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले धावनमार्ग मर्मत र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्राथमिकतामा रहेकाले एक वर्षपछि दुवै विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो । नेपाल पर्यटन वर्ष शुुरु हुँदा ती विमानस्थलका कारण पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भई सन् २०२० मा २० देखि २५ लाख पर्यटक पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
आयोजनाको आइतबार स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री अधिकारीले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विमानस्थलको धावनमार्ग परिवर्तनको काम समयमै गुणस्तरयुक्त बनाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार आगामी फागुनदेखि चार महीना राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन बन्द गरेर पहिलो चरणमा धावनमार्गको मर्मत गरिनेछ ।
सन् २०१४ बाटै विमानस्थलको धावनमार्ग बिग्रन शुरु भएको थियो । त्यसपछि २४सै घण्टा द्रुत उद्धार टोली बनाएर सतर्क अवस्थामा राखियो । धावनमार्गमा केही समस्या आएमा छोटो समयमै मर्मत गरिँदै आएको छ । विमानस्थलका अनुसार धावनमार्ग खासगरी जिरो टु देखि एक हजार ६०० मिटरसम्म अत्यन्त बिग्रिएको अवस्थामा छ । यो भूकम्पपछि बढी समस्या आएको छ ।
यसरी गरिन्छ मर्मत
विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत (कालोपत्र) जिरो टु बाट शुरु गरिनेछ । हरेक दिन ८० मिटर धावनमार्ग जोतेर त्यसबाट निक्लेको सामान फालेपछि विभिन्न तहमा निर्माण सामग्री राखेर सतहसम्म ल्याएर विमान ८ बजे सञ्चालनका लागि तयार गरिनेछ ।
क्यानले धावनमार्ग मर्मत गर्न पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्नेछ । तीन वटा जोत्ने मेशिन, तीन वटा पेभलर मेशिन तथा अन्य थुप्रै उपकरणको व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । महानिर्देशक गौतमले धावनमार्गबाहेक पूरै ट्याक्सी वे मर्मत गर्नुपर्नेछ । खासगरी ट्याक्सी डीदेखि बीसम्म मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । सो कार्यका लागि उपकरण सबै विदेशी हुनेछन् ।
धावनमार्ग दैनिक ८० मिटर जोतेर १० घण्टामा पुनः उडानका लागि तयार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । “उपकरण पर्याप्त व्यवस्था गरी चुनौतीको सामना गर्छौं । समस्या आउन सक्छन् किनकी पहिलो पटक यो काम गर्दैछौँ”, गौतमले भन्नुभयो । बारम्बार कालोपत्र उप्किएर अवरुद्ध हुँदै आएको विमानस्थलमा अब स्थायी समाधान खोजिने भएको हो ।
विमानस्थलको दक्षिणतर्फको भाग कमजोर भएकाले त्यताबाट नै मर्मत शुरु गरिने विमानस्थलले जनाएको छ । दिनहुँ ८० मिटर कालोपत्र उक्काएर मर्मत गरिनेछ । अहिले ३० सेन्टिमिटर गहिराइसम्मको कालोपत्र हटाएर नयाँ कालोपत्र हाल्ने प्राधिरणको योजना छ । कालोपत्रको काम हुँदा कुनै समस्या आउन नदिनसमेत सतर्कता अपनाइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा हरेक एक दशकमा कालोपत्र फेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर नेपालको विमानस्थल निर्माण भएयता कालोपत्र फेरिएको छैन । विमानस्थलको कालोपत्र सामान्य मर्मत गर्दै काम चलाइँदै आएको छ ।
विमानस्थलमा अहिले दैनिक करीब १०० अन्तर्राष्ट्रियसहित दैनिक सरदर ४०० उडान हुन्छन् । यो विमानस्थलबाट आन्तरिकतर्फ हेलिकप्टरसहित २० र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३१ वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।रासस
प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय एशियाली अध्ययन सम्मेलन काठमाडौँमा शुरु
लुक्ला विमानस्थलमा माउन्टेन हेलिकोप्टर दुर्घटना, लुक्ला विमानस्थल बन्द !
मुर्ति विषर्जनको विषयमा विवाद भएपछि कपिलबस्तुको कृष्णनगरमा कर्फ्यू
नवलपरासीमा बस दुर्घटनाः मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो, ५ को सनाखत !
काठमाडौंमा सडेगलेका फलफूलको यस्तो जुस
यो दशैंमा कैदीको कैद मिनाह नहुने !
आज महाअष्टमी: महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा गरिदै
रातो र पोलेको मासु नखान क्यान्सरविज्ञको सुझाव
दशैंको बेला उपत्यकामा सवारीे समस्या
दशैँका बेला काठमाडौं सहित १० ठाउँमा खाद्यान्नमा सहुलियत
पुरानाम : *
सिंगापुर विरुद्ध सन्दिप लामिछाने र अरु खेलाडीको परीक्षा आज, कसले बाजी मार्ला ?
सरकारले तोक्यो खसीबोका र च्याङ्ग्राको मूल्य, आजदेखि बिक्री सुरु
राष्ट्रपतिले विजयादशमीको टीका लगाइदिने
दशैँमा नेपाल प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
By: Diyo post
Phone No:01- 5705310 |9810239889, 9851211178